Kalfadhiga 7-aad ee Golaha Wakiillada KGS oo goordhaw ka furmaya Baydhaba – Kalfadhi
Waxaa maanta lagu wadaa inuu magaalada Baydhaba ee Xarunta Ku-meel-gaarka u ah Dowlada Goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS) uu ka furmo Kalfadhiga 7-aad ee Golaha Wakiillada KGS, halkaas oo uu Madaxweynaha KGS, Cabdicasiis Lafta Gareen, ugu qudbeyn doono Xildhibaannada Dowlad Goboleedkaas, waxaana laga yaabaa in waxyaabaha uu kala hadli doono ay qeyb ka noqoto xukuumaddiisa cusub
Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyey, oo aan ka heleyno Baydhaba, waxa ay Xildhibaannadu hadda badi joogaan Xarunta uu Baarlamaanka KGS ku shiro, halkaas oo ay uga bilaaban doonaan kulamada Kalfadhiga 7-aad, iyada oo, sida Xildhibaannada halkaas jooga ay u sheegeen Kalfadhi, ay goordhaw soo gali doonaan xarunta Madaxweyne Lafata Gareen iyo Guddoonka Golaha.
“Waxaa lagu wadaa inuu furo Kalafadhiga Golaha Wakiillada KGS Madaxweynaha Dowlad Goboleedka KGS, Cabdicaziiz Xasan Maxamed (Lafta-gareen)” ayaa lagu yiri dhigaal lagu soo daabacay 10 saacadood kahor Bogga Feysbuuga ee Madaxtooyada KGS. “Golaha Wakiiillada Dowlad Goboleedka ayaa xirmay 22 Dec. 2018” ayaa raacsanaa dhigaalkaas.
Golaha Wakiillada KGS waxaa kulan ay yeeshaan ugu dambeysay 19-kii Decembar, 2018, waana markii ay Madaxweyne u doorteen Cabdicasiis Lafta Gareen. Hase ahaatee, waxa uu si rasmiya u xirmay Kalfadhigoodii 6-aad 3 maalin kadib markii ay doorteen Lafta Gareen, iyada oo shaqooyinka ugu horeeya ee hadda hor yaala ay ugu weyn tahay in ay meel mariyaan Golaha Wasiirada ee uu dhawaan magacaabay Madaxweynaha KGS, Cabdicasiis Lafta Gareen.
Xildhibaan hore, Marxuum Boqorre oo la sheegay inuusan hal askarina haysan markii la dilayey